Baraat hammaate moo Numaatu hammeessee? Oromia Shall be Free |
bilisummaa February 5, 2015	Comments Off on Baraat hammaate moo Numaatu hammeessee?
Bara barri hammaatee
dubbiin gara galte,
Bara wanni hundi
Wanti jechaa turan
Tan hamilte malee
tan biraan moo’amte.
Baraat jijjiirame moo
Maal ta’eeti namni?
Ni dhabamee gamni?
Eessa nurraa kutte
Akka dur hin jirtuu
Tan duraan oowwituu
Sababni isaa maali
Maaliif hin qorattuu?
Maaltu nutti bu’e
Maa harka maranne?
Osoo galman gahin
Moo goluma keessaa
Dirqamaa nu jiraa
Dubbii keessa baraa!
Baraat hammaate moo
Nutti jabaatte moo
Maaltu nu laaffisee?
Onnachuu maa dhiise?
Sombaa nama dutaa.
Tags najiib Onnee Somba walaloo
Previous Oromo TV:Jaarmayaa Dubartoota Oromoo Minisootaa ijaaruuf
Next Yaa‬ Oromoo Bahaa, Dhihaa, Kabbaa, Kibbaa …Alaabaa Oromoo olqabaa diina garaa gubaa